Al-Shabaab oo Lacag u qeybisay qoysas degan Muqdisho [Sawirro]
MUQDISHO, Soomaaliya - Kooxda Al Shabaab ayaa sheegtay inay qoysas ku nool magaalada Muqdisho u qeybisay lacago ay ku sheegtay inay ahayd Zako, xilli caasimadda ay maamusho dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Cali Dheere, Afhayeenka Al Shabaab ayaa kasoo dhex-muuqday sawirro baraha Internet-ka Kooxda lasooo dhigay, iyadoo aan la sheegin goobta rasmiga ah ee ay ka dhacday qeybinta lacagta loo qeybiyay dadka shacabka ah.
Al Shabaab ayaa ku faantay in dadka ay u qeybisay lacagaha ay gaarayeen in ka badan 200 oo qof, kuwaasoo qofki ugu badan la siiyay $1,000, qeybta dhexe $500 iyo qeybta ugu hooseysay oo $200.
Isagoo dadka la hadlayay, Cali Dheere ayaa jeediyay hadallo u muuqday mid ay ku doonayso Al Shabaab inay ku qasabato qalbiga shacabka ku nool xaafadda dhanka waqooyi xiga, oo ay Kooxdan la rumeysan yahay inay wali ku awood badan tahay.
Tani ayaa dhabar jab ku nonaysa dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay ka gaabisay sugida amiga Muqdisho, islamarkana madaxda sare xafiisyadooda ku mashquulsan yihiin arrimo kale, oo kamid yahay khilaafka maamullada.
Al Shabaab ayaa horey loo sheegay inay lacago canshuuro xoog ah uga qaado ganacsatada gobolka Banaadir, in ka badan mida dowladda ka qaado.
Saraakiisha Ciidamada ayaa sheegay in qaar kamid ah xubnaha ay yihiin hogamiye-yaal...
Dilal khaarijinta Daacish oo Muqdisho kusoo laba-kacleeyay
Soomaliya 30.06.2018. 10:29
Toogasho ka dhacday Muqdisho Iyo Wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 31.05.2018. 20:28
Xubno Shabaab ah oo lagu qabtay Afgooye kahor booqashada Farmaajo
Soomaliya 01.08.2018. 09:21
Ciidanka DF Soomaaliya oo "dhibaato weyn ku haya" gobolka Gedo 03.12.2020. 18:39
Ra’iisul Wasaaraha oo kormeeray Dekedda magaalada Muqdisho 03.12.2020. 17:26
Puntland oo go'aano kasoo saartey cabashooyinka sarifka lacagaha 03.12.2020. 16:15
Maamulka Somaliland oo qaadacay magacaabadda Yuusuf Garaad 03.12.2020. 15:10
Taliyaha AFRICOM oo socdaal ku yimid magaalada Muqdisho 03.12.2020. 13:25
Baarlamaanka PL oo Xasaanadda ka qaadey 8 Xildhibaan 03.12.2020. 10:22